आकासियो बजारभाउ : कुन कुरा कती बढ्यो ? हेर्नुस - Sudur Khabar
आकासियो बजारभाउ : कुन कुरा कती बढ्यो ? हेर्नुस
प्रकाशित मिति : २९ जेष्ठ २०७५, मंगलवार ०६:४१
जेठ २९ – १५ जेठको बजेटपछि अधिकांश दैनिक उपभोग्य वस्तुको भाउ आकासिएको छ । उपभोक्ताहरू कृत्रिम मूल्यवृद्धिको मारले रन्थनिएका छन् । बजेटमा करको दरमा गरिएको हेरफेर र उद्योगीले पाउँदै आएको भ्याट फिर्ता खारेजीले बजार भाउ बढेको खुद्रा बिक्रेताहरूको भनाइ छ ।
बताए । ‘यत्तिले शंका गर्ने ठाउँ छ,’ उनले भने ।